SomaliTalk.com » Dawlada “Naas iyo Nikaax” ee Puntland. Qaybtii I. Qalinkii: Prof. Farjac
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Thursday, July 1, 2010 // 15 Jawaabood
Fiiro Gaar ah: Qoraalkan waxaa qoray, soona tebiyey Musharaxii Madaxweynaha DGPuntland Prof. Cumar Cali Farjac, fikradda uu maqaalkani xambaarsan yahay waa mid isaga u gaar ah.
Markuu talada la wareegay, waxaa madaxweynuhu magacaabay wasiiro, wasiiro ku xegeeno iyo wasaarado dhan 22. (Dr. Ali Warsame-Puntland iyo Wasaaradeheeda.)
Hadaba tirade dadka la magacaabay waxay ahayd 39 wasiir iyo wasiir ku xigeen. Weli markaas lama magacaabin madaxda wasaaradaha laga dhigay Agaasin Guud (General Directorate). Walowba tayada madaxda la magacaabay ay liidatay, waxaa taas ka xoog weynaatahy tirade dadka loo magacaabay. Waxaa Dr. Nurudin wuxuu ka khajilay fartana ku fiiqay tirade gaareysa 39 wasiir iyo wasiir ku xigeen. Hase yeeshey booyow ! maxaa manta Dr. Nurudin oran lahaa marka tirade wasiirada iyo wasiir ku xigeenadu ay heehaabayaan tira ka badan 53? Walaal Dr. Nurudin, waxa weli la soo wadaa ka daran.Weli lama magacaabin wasiirka iyo wasiir ku xigeenada wasaarada dharka iyo macuunta, wasiir iyo dhowr wasiir ku xigeeno ee wasaarada Hargaha iyo Saamaha, sidoo kale wasaarada Qaxootiga Koonfurta Somaliya ka soo galay, Wasaaradda Guryaha uyo Dejinta Qurba Joogta, Wasaarada Daanyeerka, diindiinka iyo dumadaha. Nuurow kow iyo laba lama joogo. Waxaa jirta dhallin yaro badan ee dooneysa jago wasiir iyo wasiir ku xigeen. Hadaba ha nala so xiriiraan oo ha tagaan xawaalada Dahab Shiil, anaguna si dhaqso leh ayaan ugu soo xawileynaa jago wasiir iyo wasiir ku xigeen.
Dad weynuhu waxay u malayeen magacaabidda qurba joogta loo magacaabay jagooyinka wasaaradaha. Xaqiiqdu waxay tahay aqoonta ay leeyihiin in ay tahay sida loo isticmaalo mukhaadiraadka sida qaadka, khamriga, sigaarka, buuriga, nacasta (marijuana), xawaareyso (speed), crystal meth (dhammo), qaboojiso (crack cocaine). Waxaa intaa u sii dheer ayna ku xeel dheer yihiin haweenka iyo daawashada websiteyada xunxun ee internetka. Ha ka welwelin maqaalka qaybihiisa dambe waxaanu ku soo bandhigeynaa wasiirada iyo wasiir ku xigeenada caanka ku ah isticmaalka mukhaadiraadka iyo haweenka. Weligaa ma is weydiisay sababta ay dibadda ugu dhoofaan? Dhammidood ma Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa si qarsoodi loogu magacaabay? Mise mukhaadiraadkii baa qabtay? Ma la socotaa in mar kasta oo qof wadankii ku noqonayo ay u qaadaan mukhaadiraad? Ma la socotaa in ay ka warqabaan qofka ka soo baxaya wadamada dibadda oo ay kuwa qaraabada ay yihiin ay ka dalbadaan in ay ugu geeyaan qofka soo baxaya? War ninyohow war ma ogid. Sida ay u hayso xaraaradu waxaad ka garataa marka ay kaga hor yimaadaan garoonka diyaaradda (madaarka).
Qoraalada Farjac: http://somalitalk.com/tag/farjac/
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: farjac
15 Jawaabood " Dawlada “Naas iyo Nikaax” ee Puntland. Qaybtii I. Qalinkii: Prof. Farjac "
Boowe Farjac waa iga Farjicisay bal Boowe goormad Professor noqotey. Boowe kan buuran waa beentiis.
xaji sanka says:
s/c marka hore waxaan salaamaya dhamaan dadka somaliyeed qaasatan dadka reer puntland.
way fiican tahay in laga hadlo qaladka jira waayowaxbaa ku toosa lakin yaa mudan waaye jawaabta, waan lasoconaa waxii ka dhacay doorashadii puntland waxaana ahaa goobjoog Musharaxiinta qaarbaa loo qabay inay walan yihiin kadib markii la arkay fikirkoda ama waxaa la orankaraa la socdaan wacyiga jira, xataa ciyaalka u ma dhaqmo qaarkood sida ay u dhaqmayeen taasina waa xaqiiq ( hadalgayga gadaal uraaca )
Wednesday, July 14, 2010 at 11:05 pm
farjac waa waayey madaxweyne marka yuu dadka caayin
Monday, July 12, 2010 at 4:35 am
hadii farjac uu ka afeeftay qormadiisa uuna idiin sheegay in ay tahay toosin maxaa keenay eedaynta profisorka aqoontiisa ayaa kufilan uuna ku meelmarayaa waana taagersanahay fikirkiisa saliimka ah
Monday, July 12, 2010 at 4:29 am
farjac waa nin dalku ubaahan yahay
Sunday, July 11, 2010 at 7:16 am
ASC, WALAAL WAY DHICI KARTAA FARJAC IN INYAR OO DADKAAS AH AY JIRAAN LAAKIIN HADII AAN NIRAAHNO DADKA QURBUHU WAA SIDAAS DAD UXUN HADEE ADIGU QURBAAD JOOGTAA LAMID BAANA TAHAY FAROOLE QURBUU KAYIMID QURBUUNA JOOGAY, LAAKIIN WALAALE SHAKI KUMA JIRO KAN WADAN JOOGA OO QABIILKA, QAADKA, MAAMUL XUMADA, EEXDA, IYO KALA DAMBAYN LA AANTA IN UU KA FIICAN YAHAY KAN QURBAHA JOOGAA OO WAX BARTAY OO DOONAYA MEESHUU UU ARKAY AMA UU JOOGAY SAY AHAYD IN UU KADHIGO DHULKII HALKA KAN WADAN JOOGAA UU SAN ARAG AMA NASIIB U HELIN IN UU YIMAADA AMA ARKO MAAMULKAAN AMA KALA DAMBAYN TAAN TAALA WADADMADAAN SIDA WEST GA USA,AMA CANADA, EU. MARKA WAXAAN DHIHI LAHAA FARJAC BAL DIB U YARA EEG FAKIRKA.ASC.
Saturday, July 10, 2010 at 1:17 am
waa sax fikirka mudane farjac waayo, dadka jawaabta ka bixiyey hadalka farjac waxaad u badan tihiin dad ku nool qurbaha, laakiin anigu waxaan joogaa dalka wax walba oo dhacaya waan la soconaa laakiin adinku waxaad dhagaysataan idaacad iyo website
Wednesday, July 7, 2010 at 4:44 am
prof. furjac waxaad tahay runtii nin geesi ah adoo kalana dalka iyo dadka ayaa kuu baahan lakiin xaqiiqda ayaa nin kasta o anfac dalka u leh in la xasdo
waan kuugu taageersanahay in aad runta dadweynaha tusiso si ay u ogadaan maamulkooda dhiig miiratada ah
Jamaal Hassan says:
Monday, July 5, 2010 at 7:11 am
Professorka Ka daaya Cayda wax jira ayuu ka hadlaye midda kale sxb Yaxye waxad tiri maxad shaqo uga raadsan wayday Yurub. Proffessorku haddii uu damcay in uu dalkiisa u shaqeeyo oo uu wax ka badalo muxu ku falayaa in uu dal kale u shaqeeyo, mida kale waxa kala duwan in aad naftaada u shaqaysato iyo in aad dalkaaga u shaqayso.
Ani fikir ahaan Qoraalka Farjac waa ila Saxsanyahay gaar ahaan wax qabadka Wasiiradda iyo Askarta Badan ee ilaalisa iyo Hubka ay sitaan.
Proffesore waxaanu kaa sugaynaa Qeybta Labaad ee Qoraalkaaga.
Danjire Daljire says:
Sunday, July 4, 2010 at 10:20 pm
Dadka goobta wax ku qoray weli ma baran sida afka somaliga loo qoro. Zlalan m aha waa salaan. Fegrad ma aha ee waa Fikrad. Waxay ku qorantahay Comments/ Fikradaha akhristayaasha-faalada. Qof aan wax qori oqoon in loo jawaabo ma aha.
Professorku wuxuu o qoray maqaalka dad wax garad ah, wuuna ka afeeftay dadka caadifada qabiilku soo qaadayo oo difaacidoona ilma adeertood. Hase yeeshee muxuu halayey hadii uu iaga celiyey waraabaha dibadda ka timid ee doonaya waraabaha gudaha in uu laqo. Laba waraabe waxaa ii roon kan aan dalandooli hayn markii dhibi timaado. Idinkuse ma waxaad daafaceysiin hormuudka beesheena, mise qurba ka timaadada wax biliqaysaneysa? Waxbaan meesha ka gartaye kulligeen ma isku beel baynu ka soo jeednaa? Burcadland inagaa iska leh. odayguna qurba joogta waxay yihiin buu noo sheegay.
Saturday, July 3, 2010 at 10:19 am
Salamu Calaykum. Farjacow waxaad sheegayso waxbadan ayaa kajira, dadka badankiis intii aan caamo ahayna way la socdaan, oo waaba sababta uusan qofka waxgaradka ah wakhti badan iskaga luminayn dheesha kasocota Soomaliya oo idil. Laakin hadana sidaas oo ay tahay waxaad hadalka u dhigi kartay si ka qurux badan sidaad udhigtay oo ay ku dheehan tahay dhiranaansho leh sharaf, diblomaasiyad iyo tixgelin dareenka shacabwaynaha (courage and consideration) taasoo ku sahli lahayd inay dad badan ku rumaystaan. Laakin nasiib xumo waxaad u muuqataa nin ay rag wax kadhaxeeyaan, ciil badan qaba, tabar la’aan meel dhigtay, doorashadii kusoo guuldaraystay oo xattaa shacabkii u caraysan, muddo qurbo joogay, kadibna kusoo wareeray Puntland iyo habdhaqanka shacabka Soomaliyeed ee masaakinta ah ee iska yara xayraansan, hogaan la’aanta haysa awgeed.
Marka Farjacow adiga iyo inta kale ee horumarka jecel, hadana ku ah (frustrated) siyaasadda gurracan ee Puntland ama Soomaliya iyo aqoon yaridda shacabka, waxan idunkula talin lahaa xiliga summer-ka lagu jiro ee carigu qurxoon yahay, dadka badankiina iska faraxsan yihiin, inaad xilli aroor ah fariisato meel doog leh iyo biyo yara oo shimbiro marmarayaan, kadibna aad mustaqbal dheer iyo hammi wayn oo qaadan kara 20 sano soo qorshayso sidii dadka iyo dalka wax looga badali lahaa, laakin hadaad Internettka ka cayntanto, waxaad u muuqnaysaa sidii nin gaajaysan oo wax laga boobay oo afkana dufan u marsan yahay, dukhsi badana kusoo shumuumay oo cidna rabin inay ag istaagto, iskaba daa in wax laga rumaystee.
Koleey nin waxgaranaya ayaad tahay’e, waxgaradkaaga iyo aqoontaada si kafiican sidaan u isticmaal.
calale coofadh says:
Saturday, July 3, 2010 at 1:53 am
farjac wejigiisa waxa ka muuqda had iyo jeer qosol caruureed iyo in uu yahay shactiroole,waxan odhan lahaa booskii aw kuuk ay aa kuu fiican in aaad raadsato.
puntland dhawaan iyadaa iskeed isaga baaba aysa waayo khayaal bay ku nooshay oo had iyo jeer koonfur oon rabin bay daba orodaa.
kofurna in ay kudaafad tahay waynu ognahay oonayjid iyo ceeltoona u baxayn ilaahay haw naxariisto,
Friday, July 2, 2010 at 11:09 pm
KKKKKKKK sxb farjac xaal qaado, Puntland waa dalkaagii meeshaad wax ka dhisi lahayd ayaad bilowdey inaan cay websites-ka uga buuxiso… ogow waa lagula xisaabtami doono kolkaad dalka timaado, inta ka horeyso Jaantaa Bannaan!!!!!!!!!!!!
Friday, July 2, 2010 at 5:34 am
Zalaan , All .. waar markii lagaaga adkaaday Kursiga Madaxtinimada Punt Land, ayaad dhaliil la bun buuniyey soo qoreysaa, waa yaab.
Professoor- xaal qaado , Hadii aad Professor tahay Hunguri kaaga galeen Punt Land-ta teeda haysata ! oo isku hays haystaan siyaasiyiinta u dhashay ee aan u soo qaxin sidiina Waqooyiga Ameerika & Europe.
Hadii aad Professor tahay, waxaad shaqo ka raadsan lahayd Waddanka aad joogtid jaamacadahooda, meel aan waxba ka jirin uma soo cararteen.
Somalida Magaca professor-nimada ah ay bililiqeysteen
Friday, July 2, 2010 at 3:18 am
Fegradda Farjac waa mid yaab leh waa dhameeyey oo waxaan u qaadan waayey in runtii professorku qoray mana aha xaashaa lillaah in aan lee yahay waa run ku sug balse waxaad moodaa in caro badan oo uu qabo profesorku ay ka lumisay xogtii uu ula ciil qabay in uu bulshada indhaha uga dhufto.
Haddii habka maanta ka jiraa Puntland uu yahay “clanish based administration” oo Dirtoorka laftigiisu isu soo sharaxay kal hore oo kalsooni weydiistay baarlamaan lagu soo xulay qabiil tolow maxaa khaldan ama ku jaban haddii dawlada lagu dhiso qabiil iyo qancinta beelaha tan iyo inta laga gaarayo “one man one vote”.